Ethiopia oo shaacisey 8 qof oo cusub oo laga helay COVID19 – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ethiopia oo shaacisey 8 qof oo cusub oo laga helay COVID19
Wasiirka caafimaadka itoobiya ayaa shaacisey 8 of oo laga helay CoVid19 oo ku kaaratiin sana meelaha loogu talo galay
Xaaladda COVID19Ethiopia ee sideeda bukaan ee tijaabada lagu sameeyay waxay tidhi markay ka hadleysa bukaankaa.
Shan ka mid ah waxay leeyihiin taariikhda safarka dibedda waxayna ka yimaadeen #Dubai. Waxaa loo raacay mid ka mid ah xarumaha 14-ka maalmood ee karantiillada khasabka ah, oo laba ka mid ahi yihiin sagaal bilood jir ilmaha iyo hooyadiis.
Laba ka mid ah waa: Haweeney Itoobiyaan ah oo 25 jir ah oo sidoo kale taariikh safar ku leh dibedda kana timid #Thailand. Waxay joogi jirtay mid ka mid ah 14-kii xarumood ee karantiilyada khasabka ah. Iyo 30 jir #eritariyaan naag ah oo iyaduna ka timid London oo joogi jirtay 14 maalmood xero khasab ah oo karantiil ah.
Bukaanka sideedaad waa nin 19 jir Itoobiyaan ah oo aan lahayn taariikh safar. Waxaa laga fiirsanayaa raadadkii uu lalahaa qofkii uu la kulmay ama uu ka qaadey hore.
Previous articleUAE oo kordhisay xiritaanka goobaha ganacsiga illaa iyo 18-ka Abriil
Next articleDubai extends business closure until April 18